Chinjana maemail uye Zvinhu Zvakabviswa neMistake. Undelete Emails mu Exchange Mail Bhokisi.
musha Products DataNumen Exchange Recovery Delete Exchange Objects neMistake
Delete Shanduko Zvinhu neMistake? DataNumen Exchange Recovery Unogona Kuvasunungura!
Delete Exchange maemail uye Zvinhu neMistake:
Kana iwe ukadzima email kana chimwe chinhu mu Exchange mailbox, nekudzvanya iyo "Del" bhatani, ipapo ichaendeswa kune iyo "Yadzimwa Zvinhu" folda. Unogona kuidzorera nekungochinjira ku "Dzadzimwa Zvinhu" dhairekitori, kutsvaga email kana chinhu chaunoda, uye kuchidzosera kunzvimbo yayo yepakutanga kana mamwe maficha akajairwa.
Nekudaro, kana iwe ukabvisa chinhu cheShanduko sekutsanangurwa kwazvakaita mumamiriro matatu anotevera, zvinobva zvadzimwa zvachose.
Iwe kana maneja unoshandisa iyo yakaoma-kudzima mashandiro (Shift + Del) kudzima chinhu cheShanduko. Iyo yakaoma-yekudzima mashandiro inoita kuti Exchange ibvise chinhu pasina kuitumira kune iyo "Dzakabviswa Zvinhu" dhairekitori kana iyo Yakabviswa Zvinhu Cache kana iyo Yakabviswa Zvinhu Cache chivakwa chisina kubvumidzwa.
Iwe kana maneja bvisa chinhu kubva ku "Dzadzimwa Zvinhu" dhairekitori.
Mutungamiri asingazivi anodzima bhokisi retsamba kana kunyange Exchange server kana uchishandisa Microsoft Exchange Administrator chirongwa. Mumamiriro ezvinhu akadaro, Chinjana chinobvisa zvachose iro bhokisi retsamba kana sevha kubva kudhairekitori.
Kunyangwe chinhu chikabviswa zvachose, unogona kunge uchikwanisa kuchidzorera kubva dhairekitori dhairekitori (.ost) faira rinoenderana neExchange mailbox, se OST faira iri kopi isingaenderani yezvinyorwa zvebhokisi retsamba pane server. Uye kune maviri mamiriro:
Hauna kuwiriranisa iyo OST faira ine server. Muchiitiko ichocho, chinhu chakabviswa kubva kuseva chichiripo mu OST faira kazhinji.
Wakafananidza iyo OST faira ine server. Muchiitiko ichocho, chinhu chakabviswa kubva kuseva chinobviswawo kubva pa OST ikwidzwe.
Kune chero mamiriro ezvinhu, iwe unogona kushandisa DataNumen Exchange Recovery kudzoreredza chinhu chakabviswa kubva ku OST faira. Asi kune akasiyana mamiriro, iwe unogona kutarisira kuwana icho chisina kubviswa chinhu kubva kunzvimbo dzakasiyana.
kushandisa DataNumen Exchange Recovery ku Undelete Yakagadziriswa Dzose Dzakachinjiswa Zvinhu:
Ndokumbirawo kuti uite zvinotevera kuti udzore zvachose zvakachinjirwa Exchange zvinhu ne DataNumen Exchange Recovery:
Pakombuta yako yemuno, tsvaga iyo OST faira rinoenderana neExchange mailbox uko iwe kwaunoda kusasunungura zvinhu. Iwe unogona kuona iyo faira nzvimbo zvichienderana neayo chivakwa chakaratidzwa muAptlook. Kana shandisa iyo kutsvaka shanda muWindows kuitsvaga. Kana kutsvaga munzvimbo dzinoverengeka dzakatsanangurwa.
Vhara Outlook uye chero chimwe chirongwa chinogona kuwana iyo OST ikwidzwe.
Sarudza iyo OST faira rinowanikwa mudanho rekutanga sosi OST faira kuti riwanikwe.
Gadza zvinobuda zvakagadziriswa PST zita refaira kana zvichidikanwa.
Dzvanya “Start Kupora ”bhatani kudzoreredza sosi OST ikwidzwe. DataNumen Exchange Recovery ichaongorora uye kudzoreredza zvinhu zvakabviswa mune sosi OST faira, uye chengetedza ivo mune imwe nyowani Outlook PST faira rine zita rakadomwa padanho 5.
Mushure mekudzoreredza maitiro, unogona kushandisa Microsoft Outlook kuvhura zvakabuda zvakagadziriswa PST faira uye uwane izvo zvisina kubviswa zvinhu. Kana usati wawiriranisa iyo OST faira ine sevha, ipapo unogona kuwana izvo zvisina kubvisirwa zvinhu munzvimbo dzazvo dzepakutanga. Nekudaro, kana iwe watove wakafananidza iyo OST faira, ipapo unogona kuwana izvo zvisina kubviswa zvinhu munzvimbo dzavanobviswa zvachose. Semuenzaniso, kana iwe ukashandisa "Shift + Del" bhatani kudzima zvachose email kubva ku "Inbox" folda, ipapo DataNumen Exchange Recovery ichaidzorera ku "Inbox" folda mushure mekudzoreredza. Kana iwe ukashandisa "Del" bhatani kudzima iyi email kubva ku "Inbox" folda, uye wozoidzima zvachose kubva ku "Dzadzimwa Zvinhu" folda, uye mushure mekudzoreredza, ichadzoreredzwa ku "Dzadzimwa Zvinhu" dhairekitori.
Cherechedza: Iwe unogona kuwana zvakapetwa zvisina kubvisirwa zvinhu mu "Kuwanikwazve_Groupxxx" maforodha. Ndokumbirawo ungovaregeredza. Nekuti dzimwe nguva paunobvisa chinhu kubva mubhokisi rako reExchange uye wochinjanisa ne OST faira, Outlook ichaita mamwe makopi akanyatso. DataNumen Exchange Recovery ine simba zvekuti inogona kudzoreredza ese aya akaisirwa makopi uye nekuibata se lost & zvinhu zvakawanikwa, izvo zvinodzorerwa zvoiswa mumafolda anonzi "Kuwanikwazve_Groupxxx" mune yakabuda yakagadziriswa PST faira.